Very Important: ရခိုင်ပြည်ရှိမွတ်ဆလင်များသည် သ ဘာ ဝ အ လျှောက် တိုင်း ရင်း သား၊ နိုင် ငံ သား ဖြစ် ကြောင်း၊ ပြည် ထောင် စု လွှတ် တော် သို့ တင် ပြ သည့် စာ တမ်း … | Danya Wadi
»မှတ်စု»Very Important: ရခိုင်ပြည်ရှိမွတ်ဆလင်များသည် သ ဘာ ဝ အ လျှောက် တိုင်း ရင်း သား၊ နိုင် ငံ သား ဖြစ် ကြောင်း၊ ပြည် ထောင် စု လွှတ် တော် သို့ တင် ပြ သည့် စာ တမ်း …
Posted by danyawadi on November 28, 2012 in မှတ်စု, သတင်းများ, သူ့အကြောင်း, အထူးကဏ္ဍ, အထောက်ထားများ, ဥပဒေ, ပေါ်လစီ, Photos
Go to English version click the link
The Best Doccuments of Rohingyas in Burma,
အကောင်းဆုံးရိုဟင်ဂျာ အထောက်အထားများ :
Compiled by N.D.P.D. (Revised and New addition)
PDF file ကိုအောက်ပါလင့်အတိုင်းဒေါင်းနိုင်ပါပြီ။
← Burma Campaign UK ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တွေ့ဆုံ
“ရိုဟင်ဂျာ” | ဌေးလွင်ဦး →
5 comments on “Very Important: ရခိုင်ပြည်ရှိမွတ်ဆလင်များသည် သ ဘာ ဝ အ လျှောက် တိုင်း ရင်း သား၊ နိုင် ငံ သား ဖြစ် ကြောင်း၊ ပြည် ထောင် စု လွှတ် တော် သို့ တင် ပြ သည့် စာ တမ်း …”
Very Important ရခိုင်ပြည်ရှိမွတ်ဆလင်များသည်သဘာဝအလျှောက် တိုင်းရင်းသား၊နိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း၊ပြည� November 28, 2012 at 6:21 am	Reply
[…] by danyawadi on November 28, 2012 in Documents, Laws, News, Notes, Notice, Photos, Politic, […]
Very Important ရခိုင်ပြည်ရှိမွတ်ဆလင်များသည်သဘာဝအလျှောက် တိုင်းရင်းသား၊နိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း၊ပြည� November 28, 2012 at 5:18 pm	Reply
[…] Posted by danyawadi on November 28, 2012 […]
Very Important ရခိုင်ပြည်ရှိမွတ်ဆလင်များသည်သဘာဝအလျှောက် တိုင်းရင်းသား၊နိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း၊ပြည� December 13, 2012 at 12:41 am	Reply
The Best Doccuments of Rohingyas in Burma, အကောင်းဆုံးရိုဟင်ဂျာ အထောက်အထားများ : Compiled by N.D.P.D. (Revised and New addition) | Danya Wadi March 4, 2013 at 1:12 pm	Reply
Danyawadi popular post ၊ လူကြိုက် အများဆုံးခေါင်းစဉ်များ…. | Danya Wadi January 19, 2014 at 5:24 am	Reply
[…] Very Important: ရခိုင်ပြည်ရှိမွတ်ဆလင်များသည်… […]